Imimmisele yenkonzo -
Ikhaya / Imiqathango yeNkonzo
Le migaqo kunye neemeko zilawula konke ukusetyenziswa kwewebhusayithi ye-opskar.com nayo yonke imixholo, iinkonzo kunye neemveliso ezikhoyo okanye kwiwebhusayithi (zithathwe kunye, iWebhusayithi). Indawo yeWebhusayithi yeyakho kwaye iqhutywa zii-ops ("ops"). Indawo yeWebhusayithi inikezelwa ngokuxhomekeke ekwamkelweni kwakho ngaphandle kokuguqulwa kwayo yonke imigaqo kunye neemeko eziqulathwe apha nayo yonke eminye imigaqo yokusebenza, imigaqo-nkqubo (kubandakanya, ngaphandle komda, umgaqo-nkqubo wabucala we-OPS) kunye neenkqubo ezinokupapashwa amaxesha ngamaxesha kule ndawo ngo I-OPS (ngokudibeneyo, "isiVumelwano").
Kucelwa ufunde esi siVumelwano ngokucophelela ngaphambi kokufikelela okanye ukusebenzisa iWebhu. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yewebhsayithi, uyavuma ukuba ubophelelwe yimimiselo neemeko zesi sivumelwano. Ukuba awuvumelani nayo yonke imimiselo nemimiselo yesi sivumelwano, ngoko awukwazi ukufikelela kwiWebhu okanye ukusebenzisa nayiphi na inkonzo. Ukuba le miqathango neemeko zithathwa njengento eyenziwe yi-OPS, ukwamkela kuyacaca ngokukodwa kule miqathango. IWebhusayithi iyatholakala kuphela kubantu abancinane abaneminyaka eyi-13 ubudala.
I-akhawunti yakho ye-opskar.com kunye neSayithi. Ukuba udala iblogi / isayithi kwiWebhsayithi, unembopheleleko yokugcina ukhuseleko lweakhawunti yakho kunye nebhulogi, kwaye unembopheleleko ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzeka phantsi kwe-akhawunti kunye nawaphi na amanyathelo athathwe malunga nebhulogi. Awufanele uchaze okanye unike amagama abalulekileyo kwiblogi yakho ngendlela ephosakeleyo okanye engekho mthethweni, kubandakanyeka ngendlela ejoliswe ekuthengiseni igama okanye idumela labanye, kwaye i-OPS ingatshintsha okanye isuse nayiphi na inkcazo okanye igama elingundoqo elingabonakaliyo okanye elingekho mthethweni, okanye mhlawumbi kungabangela uxanduva lwe-OPS. Kumele uxelele ngokukhawuleza i-OPS kwanoma yiyiphi into engagunyaziswanga yeblogi yakho, i-akhawunti yakho okanye nayiphina imigaqo yokukhusela. I-OPS ayiyi kuhlawulwa nayiphi na imisebenzi okanye ukushiywa nguwe, kubandakanywa nayiphi na umonakalo woluphi uhlobo olwenziweyo ngenxa yezenzo okanye ukushiya.
Uxanduva lwaBanegalelo. Ukuba usebenzisa ibhlog, ubeke izimvo kwibhlog, uthumele izinto kwiWebhusayithi, uthumele amakhonkco kwiWebhusayithi, okanye wenze enye (okanye uvumele naliphi na iqela lesithathu ukuba lenze) izinto ezikhoyo ngeWebhusayithi (nayiphi na into enjalo, "Umxholo" ) Unoxanduva olupheleleyo lomxholo, kwaye nakuphi na ukwenzakala okubangelwa koko. Injalo imeko nokuba umxholo ekuthethwa ngawo wenza isicatshulwa, imizobo, ifayile yeaudio, okanye isoftware yekhompyuter. Ngokwenza uMxholo ufumaneke, umele kwaye uqinisekise ukuba:
Ukukhuphela, ukukopisha nokusetyenziswa koQhagamshelwano akuyi kuphula amalungelo amalungelo, kubandakanywa kodwa kungagqithwanga kwi-copyright, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuthengisa okanye amalungelo e-trade secret, nawaphi na umntu wesithathu;
ibhlog yakho ayichazwanga ngegama elahlekisa abafundi bakho ukuba bacinge ukuba ungomnye umntu okanye inkampani. Umzekelo, i-URL yebhlog yakho okanye igama ayilogama lomntu ngaphandle kwakho okanye inkampani engeyiyo eyakho; Kwaye, kwimeko yokuQulathi kubandakanya ikhowudi yekhompyuter, uhlelwe ngokuchanekileyo kunye / okanye uchaze uhlobo, uhlobo, ukusetyenziswa kunye nefuthe lezixhobo, nokuba ucelwe ukuba wenze njalo nge-OPS okanye ngenye indlela.
Ngokuthumela i-Content kwi-OPS ukuba ifakwe kwiWebhusayithi yakho, unikezela i-OPS kwilizwe lonke, i-royalty free, kunye nelayisenisi engekho yodwa yokuvelisa, ukuguqula, ukulungelelanisa nokushicilela okuqukethwe kuphela ngenjongo yokubonisa, ukusabalalisa nokukhuthaza ibhulogi yakho. . Ukuba ususa isiqulatho, i-OPS izakusebenzisa imizamo efanelekileyo yokuyisusa kwiWebhusayithi, kodwa uyavuma ukuba i-caching okanye izikhokelo kwi-Content ayinakwenziwa ngokukhawuleza ayifumaneki.
Ngaphandle kokuthintela nakuphi na ukumelwa okanye iiwaranti, i-OPS inelungelo (nangona ingesosibophelelo), ngokubona kwe-OPS (i) ukwala okanye ukususa nasiphi na isiqulatho, ngokwembono efanelekileyo ye-OPS, esaphula nawuphi na umgaqo-nkqubo we-OPS okanye nangayiphi na indlela inobungozi okanye ophikisayo, okanye (ii) ukuyekisa okanye ukwala ukufikelela kunye nokusetyenziswa kweWebhusayithi kuye nawuphina umntu okanye iqumrhu ngaso nasiphi na isizathu, ngokubona kwe-OPS. I-OPS ayizukuba nasibophelelo sokubonelela ngembuyiselo yazo naziphi na izixa-mali ebezihlawulwe ngaphambili. 3
Intlawulo kunye nokuhlaziywa.
Ngokukhetha imveliso okanye inkonzo, uyavuma ukuhlawula i-OPS ngexesha elilodwa kunye / okanye ngenyanga okanye iindleko zonyaka zokubhaliselwa ezibonisiweyo (eminye imiqathango yentlawulo ingafakwa nakweminye inxibelelwano). Iintlawulo zokubhaliselwa ziya kuhlawulwa ngomhla wokuhlawula kwangaphambili ngosuku osibhalisela ukuPhucula kwaye uza kugubungela ukusebenzisa le nkonzo kwithuba lokubhaliselwa kwenyanga okanye ngonyaka njengoko kubonisiwe. Intlawulo ayibuyiselwa.
Ngaphandle kokuba ukwazise i-OPS ngaphambi kokuphela kwexesha elibhalisiweyo lokubhalisa ofuna ukukhansela ukubhalisa, ukubhalisa kwakho kuya kuvuselela ngokutsha kwaye ugunyaze ukuba siqokelele umrhumo wonyaka wokubhalisa okanye wokubhaliselwa kwenyanga (kunye naliphi na irhafu) usebenzisa nayiphi na ikhadi lekhredithi okanye enye indlela yokuhlawula esinayo kwingxelo yakho. Ukuphuculwa kunokukhanselwa nanini na ngokuthumela isicelo sakho kwi-OPS ngokubhala.
Imirhumo; Intlawulo. Ngokubhalisela iakhawunti yeeNkonzo uyavuma ukuhlawula i-OPS kwimirhumo efanelekileyo yokuseta kunye neerhafu eziphindaphindayo. Imirhumo efunekayo iya kufakwa kwi-invoyisi ukusukela ngomhla wokusekwa kweenkonzo zakho nangaphambi kokusebenzisa ezo nkonzo. I-OPS inelungelo lokutshintsha imiqathango yentlawulo kunye nemirhumo ngeentsuku ezingamashumi amathathu (30) ngaphambi kokubhalwa kwakho. Iinkonzo zinokurhoxiswa nanini na ngeentsuku ezingamashumi amathathu (30) isaziso esibhaliweyo kwiNkxaso ye-OPS. Ukuba inkonzo yakho ibandakanya ukufikelela kwinkxaso ephambili ye-imeyile. "Inkxaso ye-imeyile" kuthetha ukukwazi ukwenza izicelo zoncedo lobuchwephesha ngoncedo lwe-imeyile ngalo naliphi na ixesha (ngemizamo efanelekileyo ye-OPS yokuphendula kusuku olunye lweshishini) malunga nokusetyenziswa kweeNkonzo zeVIP. "Ukubekwa phambili" kuthetha ukuba inkxaso ithatha indawo ephambili kunenkxaso yabasebenzisi beenkonzo ezisemgangathweni okanye zasimahla ze-opskar.com. Yonke inkxaso iya kubonelelwa ngokungqinelana neenkqubo zomgangatho we-OPS, iinkqubo kunye nemigaqo-nkqubo
Uxanduva lweeNdwendwe zeWebhusayithi. I-OPS ayikhange ivavanye, kwaye ayinakho ukuphonononga, yonke imathiriyeli, kubandakanya isoftware yekhompyuter, eposwe kwiWebhusayithi, kwaye ke ayinakuba noxanduva lomxholo, ukusetyenziswa okanye iziphumo. Ngokusebenza kweWebhusayithi, i-OPS ayibonisi okanye ayithethi ukuba ixhasa izinto ezithunyelweyo, okanye ikholelwa ukuba loo nto ichanekile, iluncedo okanye ayinabungozi. Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kufuneka ukuzikhusela kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye nezinye izinto eziyingozi okanye ezonakalisayo. Indawo yeWebhusayithi inokuba nomxholo okhubekisayo, ongamanyala, okanye ongafanelekanga, kunye nomxholo oqulethe ukungachaneki kwezobuchwephesha, iimpazamo zokuchwetheza kunye nezinye iimpazamo. Indawo yeWebhusayithi inokuba nayo inezinto ezinyhasha amalungelo abucala okanye amalungelo oluntu, okanye inyhasha ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namanye amalungelo obunini, kubantu besithathu, okanye ukukhuphela, ukukopa okanye ukusetyenziswa kwayo kuxhomekeke kwimigaqo nemigaqo eyongezelelweyo, echaziweyo okanye engafakwanga. I-OPS iyalahla naluphi na uxanduva lwayo nayiphi na ingozi ebangelwe kukusetyenziswa ziindwendwe zeWebhusayithi, okanye nakuphi na ukukhutshelwa ngabo batyelele umxholo othunyelwe apho.
Okubhaliweyo Kuthunyelwe Kwezinye iiwebhusayithi. Asizange sihlolisise, kwaye asikwazi ukuhlaziya, zonke izinto, kuquka iprogram yekhompyutheni, eyenziwa ngokufumaneka kwiiwebhusayithi kunye newebhsayithi apho kukho izixhumanisi ze-opskar.com, kwaye zidibanisa ne-opskar.com. i-yourcompany ayinayo nayiphi na ilawulo phezu kwewebhusayithi engekho yakho ye-yourcompany kunye newebhsayithi, kwaye ayikho uxanduva lokuqukethwe kwayo okanye ukusebenzisa kwayo. Ngokuqhagamshelana newebhusayithi yakho engekho yecomputer yakho okanye iphepha lewebhu, i-OPS ayifaki okanye ibonisa ukuba ivumela iwebhusayithi okanye ikhasi lewebhu. Unoxanduva lokuthatha isilumkiso njengoko kuyimfuneko ukukhusela kunye neenkqubo zakho zekhompyutheni ezivela kwiintsholongwane, iimbungu, amahashe eTrojan kunye nezinye izinto eziyingozi okanye eziyingozi. I-OPS inqabile nawuphi na uxanduva malunga naluphi na umonakalo obangelwa kukusebenzisa kwakho iiwebhusayithi ezingekho ii-ops kunye namaphepha ewebhu.
Ukophulwa kwelungelo lokushicilela kunye noMgaqo-nkqubo weDMCA. Njengoko inkampani yakho icela abanye ukuba bahloniphe amalungelo ayo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iyawahlonipha amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye. Ukuba uyakholelwa kwinto ebekwe okanye edityaniswe kuyo opskar.com iphula ilungelo lakho lokushicilela, uyakhuthazwa ukuba wazise i-OPS ngokungqinelana noMgaqo-nkqubo we-OPS's Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). I-OPS iya kuphendula kuzo zonke ezo zaziso, kubandakanya njengoko kufuneka okanye kufanelekile ngokususa izinto ezaphulayo okanye ukukhubaza lonke ikhonkco kwizixhobo zokwaphula umthetho. I-OPS iyakuphelisa ukufikelela kweendwendwe kunye nokusetyenziswa kweWebhusayithi ukuba, phantsi kweemeko ezifanelekileyo, undwendwe lizimisele ukuba luphule amalungelo obunini okanye amanye amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ye-OPS okanye abanye. Kwimeko yokupheliswa okunjalo, i-OPS ayisayi kuba nasibophelelo sokubonelela ngembuyiselo yazo naziphi na izixa-mali ebezihlawulwe ngaphambili kwi-OPS.
I-intellectual property. Esi siVumelwano asidluliseli kwinkampani yakho sisiya nakuyiphi na i-OPS okanye ipropathi yomntu wesithathu, kwaye konke okufanelekileyo, isihloko kunye nomdla kwipropathi enjalo iya kuhlala (njengaphakathi kwamaqela) kuphela ne-OPS. I-OPS, opskar.com, ilogo opskar.com, nazo zonke ezinye iimpawu zorhwebo, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene ne-opskar.com, okanye iWebhusayithi ziimpawu zorhwebo okanye ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo ze-OPS okanye iilayisensi ze-OPS. Olunye uphawu lwentengiso, amanqaku enkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswe ngokunxulumene neWebhusayithi zinokuba ziimpawu zorhwebo zomnye umntu. Ukusetyenziswa kwakho kweWebhusayithi akuniki lungelo okanye ilayisensi yokuvelisa kwakhona okanye ukusebenzisa enye i-OPS okanye iimpawu zorhwebo zomntu wesithathu.
Izibhengezo. I-OPS inelungelo lokubonisa izibhengezo kwiblogi yakho ngaphandle kokuba uthenge i-akhawunti engenazo-ntengiso.
Isabelo. I-OPS inelungelo lokubonisa amakhonkco enqaku anje nge 'Blog kwiopskar.com,' umbhali womxholo, kunye nefonti kwifayile yebhlog yakho esezantsi okanye kwibar yesixhobo.
Iimveliso zamaqabane. Ngokusebenzisa imveliso yeqabane (umz. Umxholo) kwelinye lamaqabane ethu, uyavumelana nemigaqo yenkonzo yelo qabane. Unokukhetha ukuphuma kwimigaqo yenkonzo nangaliphi na ixesha ngokuthi ungasebenzi imveliso yeqabane.
Amagama eDomain. Ukuba ubhalisa igama lethambeka, usebenzisa okanye ugqithisa igama ledomeyini ebelibhalisiwe ngaphambili, uyavuma kwaye uyavuma ukuba ukusetyenziswa kwegama lesizinda kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo yeIntanethi yamagama abelweyo kunye namanani ("ICANN"), kubandakanya Amalungelo oBhaliso noXanduva.
Utshintsho. I-OPS igcina ilungelo, ngokwengqiqo yalo kuphela, ukuguqula okanye ukubuyisela nayiphi na indawo yesi siVumelwano. Kuwuxanduva lwakho ukukhangela kwesi siVumelwano ngokuphindaphindiweyo ukuze utshintshe. Ukusetyenziswa kwakho ngokuqhubekayo okanye ukufikelela kwiWebhusayithi emva kokuthunyelwa kwazo nayiphi na utshintsho kwesi siVumelwano kubandakanya ukwamkelwa kwezo zinguqulelo. I-OPS inokuthi inike iinkonzo ezintsha kunye / okanye iinkalo kwiWebhusayithi (kubandakanywa, ukukhutshwa kwezixhobo ezintsha kunye nezibonelelo). Iimpawu ezintsha kunye / okanye iinkonzo ziya kuxhomekeka kwimimiselo nemimiselo yesi siVumelwano.
Ukupheliswa. I-OPS inokuphelisa ukufikelela kwakho kuyo yonke into okanye nayiphi na indawo yeWebhusayithi nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwesizathu, ngaphandle kwesaziso, esisebenza kwangoko. Ukuba unqwenela ukusiphelisa esi siVumelwano okanye iakhawunti yakho ye-opskar.com (ukuba unayo), unokuyeka ukusebenzisa iWebhusayithi. Ngaphandle koku kuchazwe ngasentla, ukuba unayo iakhawunti yeenkonzo ezihlawulelweyo, loo akhawunti inokupheliswa kuphela yi-OPS ukuba wophule ngokwesi siVumelwano kwaye usilele ukunyanga ulwaphulo olo ngaphakathi kweentsuku ezingamashumi amathathu (30) ukusuka kwisaziso se-OPS kuwe; ukuba i-OPS inokuyiphelisa iWebhusayithi kwangoko njengenxalenye yokuvalwa ngokubanzi kwenkonzo yethu. Onke amasolotya esi siVumelwano ekufuneka ngokwemvelo asinde ekuphelisweni aya kusinda ekuphelisweni, kubandakanya, ngaphandle komda, ubunini, izibonelelo, i-waranti, ukhuseleko kunye nemida yoxanduva.
Ukuziphendulela kweeWaranti. Indawo yeWebhusayithi ibonelelwa "njengoko kunjalo". I-OPS kunye nabanikezeli bayo kunye nabanini bamaphepha-mvume ngokwenjenje bayazichasa zonke iiwaranti zalo naluphi na uhlobo, ezivakalisiweyo okanye ezichaziweyo, kubandakanya, ngaphandle kwesithintelo, iiwaranti zokurhweba, ukulungela injongo ethile kunye nokungathotyelwa. Nokuba inkampani yakho okanye ababoneleli bayo kunye nabaniki layisenisi, yenza nayiphi na iwaranti ukuba iWebhusayithi ayizukufumana mpazamo okanye ukufikelela kuyo kuya kuqhubeka okanye kungaphazanyiswa. Uyaqonda ukuba ukhuphele ngaphandle, okanye kungenjalo ufumane umxholo okanye iinkonzo ngeWebhusayithi ngokokubona kwakho kunye nomngcipheko.
Ukuncipha kweMfanelo. Akukho sithuba siza kuba ne-OPS, okanye abanikezeli bayo okanye ilayisenisi, kufuneka bathathwe ngokumalunga nanoma yimuphi umbandela wesivumelwano phantsi kwayo nayiphi na isivumelwano, ukunganaki, uxanduva oluqinileyo okanye enye imfundiso engumthetho okanye elinganayo: (i) nayiphina imonakalo ekhethekileyo okanye engafanelekanga; (ii) indleko yokuthengwa kwemveliso okanye iinkonzo ezithatha indawo; (iii) ukuphazamiseka kokusetyenziswa okanye ukulahlekelwa okanye urhwaphilizo lweedatha; okanye (iv) nayiphi na imali edlula iifizi ezihlawulwe nguwe kwi-OPS phantsi kwesi sivumelwano ngeli xesha leenyanga ezilishumi elinesibini (12) ngaphambi kokuba kubangelwe isenzo. I-OPS ayiyi kuba naxanduva lokungaphumeleli okanye ukulibaziseka ngenxa yemicimbi engaphaya kolawulo olufanelekileyo. Oku kulandelayo akuyi kusebenza kwinqanaba elinqatshelwe ngumthetho osebenzayo.
Ukumelwa jikelele kunye neWaranti. Umela kwaye uqinisekisa ukuba (i) ukusetyenziswa kwakho kweWebhsayithi kuya kuhambelana ngqo noMgaqo-nkqubo weNgcaciso ye-OPS, kwesi siVumelwano kunye nayo yonke imithetho esebenzayo nemimiselo (kubandakanyeka ngaphandle kwemida nayiphi na imithetho yemimandla kwilizwe lakho, kwisizwe, kwisixeko , okanye enye indawo karhulumente, malunga nokuziphatha kwe-intanethi kunye nomxholo okwamkelekileyo, kwaye kuquka yonke imithetho echaphazelekayo malunga nokuhanjiswa kwedatha yezobugcisa ephuma eMelika okanye ilizwe ohlala kulo) kunye (ii) nokusetyenziswa kwakho kweWebhsayithi akuyi kuphulwa okanye asebenzise kakubi amalungelo epropati yoluntu kwanoma yimuphi umntu wesithathu.
Ukuhlawulelwa. Uyavuma ukukhusela kwaye ubambe i-OPS engenabungozi, iikontraki zayo, kunye nelayisenisi yayo, kunye nabalawuli babo, amagosa, abasebenzi kunye neearhente ezivela kuwo onke amabango kunye nenkcitho, kubandakanya nemirhumo yamagqwetha, evela ekusebenziseni kwakho iwebhusayithi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho waphula esi siVumelwano.
Iintlobo ngeentlobo. Esi siVumelwano sisivumelwano sonke phakathi kwe-OPS kunye nawe malunga nomba ophambili, kwaye zinokulungiswa kuphela ngesilungiso esibhaliweyo esisayinwe ligunya eligunyazisiweyo lenkampani yakho, okanye ngokuthunyelwa yinkampani yakho yenguqulo ehlaziyiweyo. Ngaphandle komthetho osebenzayo, ukuba ukhona, unika ngenye indlela, esi siVumelwano, nakuphi na ukufikelela okanye ukusetyenziswa kweWebhusayithi kuya kulawulwa yimithetho yelizwe laseCalifornia, e-USA, ngaphandle kwempikiswano yemithetho, nendawo efanelekileyo naziphi na iimbambano ezivela okanye ezinxulumene nayo nayiphi na into ziya kuba ziinkundla zikarhulumente nezomdibaniso ezikwiSan Francisco County, California. Ngaphandle kwamabango okhuseleko okanye olinganayo okanye amalungelo ngokubhekisele kumalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. I-Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) ngabalamli abathathu abonyulwe ngokwemigaqo enjalo. Ulamlo luya kwenzeka eSan Francisco, eCalifornia, ngolwimi lwesiNgesi kwaye isigqibo sokulamla sinokunyanzeliswa nakweyiphi na inkundla. Iqela elichaphazelekayo kulo naliphi na inyathelo okanye inkqubo yokunyanzelisa esi siVumelwano liya kuba nelungelo kwiindleko kunye neefizi zamagqwetha. Ukuba naliphi na icandelo lesi siVumelwano ligcinwe lingasebenzi okanye linganyanzeleki, elo candelo liya kuthathwa njengelibonisa iinjongo zala maqela, kwaye iinxalenye ezishiyekileyo ziya kuhlala zisebenza ngokupheleleyo. Ukurhoxiswa liqela lalo naliphi na ixesha okanye imeko yesi siVumelwano okanye nakuphi na ukophulwa kwaso, nakweyiphi na imeko, ngekhe kulirhoxise elo xesha okanye loo meko okanye nakuphi na ukophulwa kwayo okulandelayo. Unokwabela amalungelo akho phantsi kwesi siVumelwano kulo naliphi na iqela elivumayo, kwaye livume ukubotshelelwa, yimigaqo kunye neemeko zalo; I-OPS inokwabela amalungelo ayo phantsi kwesi siVumelwano ngaphandle kwemeko. Esi siVumelwano siza kubophelela kwaye siza kulungiselela amaqela, abalandela emva kwabo kunye nokwabiwa okuvumelekileyo.